गाउँ सरकारका दलित महिला भन्छन्ः संघीयता नआएको भए चुलोचौकोमै हुन्थ्यौं – Merosamaya
विभेद नाघेर यहाँसम्म आइपुग्यौं, अब अध्यक्ष उठ्छौं
सनिसरा बिकलाई ठ्याक्कै तिथिमितिको हिसाब छैन, एउटै गोरेटोमा कति जना तर्किएर हिँडे । सँगै वन गएकी सखाले होच्याएर ‘कमिनी’ भन्दा कतिपटक मन दुख्यो, बेहिसाब छ । एउटै मुलको पानी खाने छिमेकी कति पटक भाँडा छोइन्छ कि भनेर पन्छिए, त्यसको पनि जोडघटाउ छैन ।
मेलापातमा सबैलाई थालमा खाजा दिँदा उनलाई टपरीका किन दिइन्थ्यो ? सनिसराले उत्तर मागिनन् । उपल्लो भनिएका जातको घरमा जाँदा केही खानेकुरा दिँदा अलक्क दिन्थे, ढिलमा बसेर खान्थिन् । अरुले नमाझ्दा पनि हुने तर आफूले भाँडा माझेर घोप्टाउँदा सनिसराले प्रश्न गरिनन् ।
मेलिना नेपालीलाई लाग्छ, दलित भएकै कारण हुने त्यस्ता अपमान र दुब्र्यहारमाथि प्रश्न गर्नुपथ्र्यो । ‘तर, बोल्न सक्ने अवस्था नै थिएन होला, ऊ बेला । दलित भएकै कारण घर, पधेँरा, मेला, समाज हरेक ठाउँमा विभेद थियो,’ मेलिनाले थपिन्, ‘हाम्रा बाजेबजैले कतिसम्मको विभेद खेपेर आइपुगे होलान् ।’
दलित भएकै कारण सामाजिक हपमानको जाँतोमा कतिपयटक पिसिनुप¥यो, हिता रुपाखेतीलाई अनुमान छैन । तर, उनलाई यो चाहिँ थाहा छ, ‘दलितलाई दिइएको अधिकारमाथि धाबा बोल्ने र दबाइराख्ने, सुविधाबाट बञ्चित गराइराख्ने काम चाहिँ थुप्रै पटक भए ।’
कास्कीमै दलितले भान्छा छाइदिएको भन्दै मरणाशन्न हुने गरी कुटिएको खबरले सरिता सुनारलाई बिक्षिप्त बनायो । समाजमा दलितलाई गरिने अपमानलाई सरिताले अहिले पनि साक्षात्कार गरिराखेकी छन् ।
कोही साइतमा निस्किँदा बाटोमा भेट भयो भने गाली गर्दै साइत बिगारिदिइ भन्दै फर्किएकका सामाजका मान्छेहरुलाई अरुणा विकले नजिकबाट नियालेकी छन् । उनको अनुभवले पनि भन्छ, ‘विभेदको एउटा चरम सीमा नाघेर यहाँसम्म आइपुगेका हौं ।’
हिजो विभेद खेपेका, नजिकबाट नियालेका तिनै दलित समुदायका सनिसरा, मेलिना, हिता, सरिताहरुको अहिले दैनिकी फेरिएको छ । अहिले उनीहरुले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर स्थानीय सरकारमा आइपुगेका छन् ।
संविधानले नै स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेपछि उनीहरु चुनाव जितेरै कास्कीको रुपा गाउँपालिका सदस्य बनेका हुन् ।
‘यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धी हो । संविधानले नै व्यवस्था नगरेको भए हामीले ठाउँ पाउने थिएनौं,’ रुपा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ कि सदस्य मेलिना भन्छिन्, ‘पहिलो दलितसम्म आइपुग्ने नै थिएन, दोस्रो आइपुगिहाले पनि टाठा बाठा पुरुषले नै पद हुत्याउने थिए ।’
हिजो हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने समाजका उपल्लो जात भनिएकाहरुले गर्ने व्यवहार अहिले फरक भएको उनीहरुको बुझाइ छ । ‘जनप्रतिनिधि भएपछि हाम्रो दैनिकी फेरिएको छ । हिजो भरसक कार्यक्रममै नबोलाउने मान्छेहरुले अहिले अतिथि बनाएर बोलाउँछन्,’ सरिताले भनुवन सुनाउँछिन् ।
आजभोली कसैले विभेद, अन्याय र दुब्र्यवहार गरे त्यसको प्रतिकार गर्न यी महिलाहरुले सुझाउँछन् । राज्यले सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्ने भनेको छ । तर पनि अपमान हुन्छ भने न्यायको लडाइँ लड्न जागरुक गराउने काम उनीहरुले गरेका छन् ।
दलितमाथि गरिने अपमान एकातिर र महिला भएकै कारण गरिने दुव्र्यवहार अर्कोतिर भएको समाज अहिले धेरै फेरिएको मेलिनाको अनुभव छ । ‘श्रीमान ट्याक्टर चलाउन निस्कने तयारी गर्दा, म कार्यक्रममा निस्किने तयारी गर्दै हुन्छ । बच्चा सासुससुरा र बहिनीले सम्हाल्छन् । उहाँ पैसा कमाउन निस्कनुहुन्छ, म गाउँ बदल्न,’ मेलिनाले भनिन्, ‘वडा सदस्य भएर आएपछि ४÷४ पटक त प्रमुख अतिथि बनेर कार्यक्रम भाषण गरेकी छु ।’
५० प्रतिशत क्षमता विकास गर्यौं
अहिले उनीहरुलाई जनताले समस्या सुनाउँछन्, अप्ठेरो बताउँछन् । कुनै जाती विशेष होइन, उनीहरु जनताको बनेका छन् । बाटोघाटो, खानेपानी, भवन चाहिएको मागसम्म आउँछन् । पहिलेजस्तो समाजमा छोइछिटो चल्दैन । जुनसुकै जातीकै भए पनि एकैठाउँमा खाना खाने, सरसहयोग गर्ने सरिता सुनार अनुभव सुनाइन् ।
अर्को पाली अध्यक्ष उठ्ने हो
राजनीतिक विचार, सिद्धान्तको विषयमा थाहा थिएन तर पार्टीको झण्डा लिएर उनीहरु जनताको घरदैलोमा पुगे । ‘राजनीति त बल्ल बुझ्दै छौं,’ मेलिनाले भनिन् । रुपा गाउँपालिकामा ७ वटा वडाबाट एक एक जना महिला सदस्य निर्वाचित भएर गाउँ सरकारमा छिरे ।
यसभन्दा अघि केहीलाई कुनै संघसंस्था, आमा समूहमासमेत चुनाव लडेको अनुभव थिएन ।
केही महिलालाई अझै समय व्यवस्थापन गर्न समस्या हुँदा केही सदस्यको दिनचर्चा भने गाउँपालिका र जनताका कार्यक्रममै जाँदा बित्छ । दलितका नाममा छुट्टिएको बजेट कहाँ गयो ? दलित उत्थान र कार्यक्रमका लागि केके योजना लैजाने ? दलित समुदायमा केके समस्या छन् ? दलित महिला सदस्यले अहिले खोज्ने गरेका छन् ।
उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ मासिक सेवा सुविधा पाउँछन् । त्यसबाट सामान्य खाजा र मसलन्द खर्चमा सकिने उनीहरु सुनाउँछन् । घरको व्यवस्थापन मिलाउँदै अझै अगाडि बढ्ने दलित महिला सदस्यको हिम्मत पलाएको छ ।
केही महिला सदस्य वडाध्यक्षकै दाबी गर्छन् । मेलिना, सरिता, हिता रुपाखेतीहरु राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुँदै अझै उपल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘सदस्य भइयो । हिम्मत आयो । अब वडाध्यक्षमै उठ्ने हो ।’साभार: अमृत सुवेदी/ www.onlinekhabar.com